ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း6ဟင်းချက် Romance ကိုအဘို့အဟော့သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေ
ထိပ်တန်း6ဟင်းချက် Romance ကိုအဘို့အဟော့သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေ
self-အမည်ခံ Foodie အဖြစ်, ကျွန်မမြောက်မြားစွာအကြောင်းပြချက်ကိုးကားနိုင်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာထိပ်များမှာ6ချက်ပြုတ်ရန်အကြောင်းပြချက် "ပူ,"အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့ချိန်းတွေ့နှင့်မိတ်လိုက်မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်.
1. ဟင်းချက်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ပြည့်စုံသော "စာရွက်" ပေးပါသည်.
အမျိုးသမီးအများစုလိုပဲ, ငါတရားရုံးများလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အထီး suitors အားဖြင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းစားသောက်ဆိုင်မှာ wined နှင့်ချစ်သည်ခံရတတ်. ဒါပေမဲ့, ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲအဖြစ်, တဦးတည်းရဲ့ home ရဲ့ privacy အတွက် shared တစ်အိမ်မှာချက်ပြုတ်စားသောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. အလွန် "ရင်းနှီးသော" တစ်ခုခုရှိင်— ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနှင့်အတူ, အနည်းငယ်ဂီတ, ကခုန်နှင့်အခြေအနေသတ်ပုံလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်သင့်ဆံပင်ဆင်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်. ကြာပွတ်crèmeမည်သူမဆို?
ထုတ်စားသုံးသောအခါ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာအစားအစာများလုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်, ငွေရတတ်သောသူနှင့်ဆူအောင်ကျွေးသောဝက်အူချောင်းနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်, ပိုလျှံဆီကြော်, "စူပါအရွယ်အစားရှိ" နှင့်အစားအသောက်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အစားအစာဓာတ်မတည်နှင့်အတူသူတို့အဘို့အသင့်လျော်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲ. ထွက်စားတစ်ဦးထက်ပိုသောလမ်းသို့ငွေကုန်ကြေးကျရှိနိုင်ပါသည်.
3. အချက်အပြုတ်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်စုံတစ်ရာသောမိန်းမသို့မဟုတ်ယောက်ျားရဲ့ရင်ခုန်စရာကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှ add.
ချိန်းတွေ့ဈေးကွက်တွင်သင်၏ "Blue Book က" တန်ဖိုးတိုးမြှင့်အဖြစ်ကစဉ်းစားပါ.
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကယောက်ျားစာရေးဆရာမကြာသေးမီကရေးသားခဲ့သည်အဘယ်သို့သောင့်: "မိန်းမအရေအတွက်ထင်ရှားစွာသူတို့ချက်ပြုတ်မခံနိုင်သည်ဝန်ခံသောထိုနေ့ရက်ကာလကိုအလွန်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမချက်ပြုတ်မနိုင်ကပြောပါတယ်သည့်အခါ, သူတော်ကောင်းတို့၏ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးမှဆင်းသက်လာသောပထမဦးဆုံးအတွေးရဲသင်ကိုယ်တိုင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူကြပါနှင့်မည်သို့သင်သည်ငါ့ကိုဂရုစိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုပုံ "ဖြစ်ပါတယ်?"
နောက်တဖန်မသင်အကြိုက်ဆုံးမုန့်ညက်ကို fix ရဲ့ရန်ကို mom, အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ, သို့မဟုတ်သင့်ရပ်ကွက်အတွင်းစားသောက်ဆိုင်တွင်တနင်္လာနေ့ရဲ့ menu ပေါ်တွင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြောင်း, သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုယူ-ထွက်; သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်လို့ရပါတယ်!
သာယာသော aroma ထံမှ, ထိုပန်းကန်ပေါ်မှာမျက်စိ-နှစ်သက်ဖွယ်အစီအစဉ်များကိုမှ, အရောင်အဆင်းနဲ့ texture အမျိုးမျိုးအတွက်, ကောင်းကင်အရသာမှ— ကောင်းတစ်ဦးမုန့်ညက်ကျွန်တော်ဤမျှလောက်များစွာသောအဆင့်ဆင့်အပေါ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်ဝစွာကျွေးနိုင်မည်.
သင်သည်ချက်ပြုတ်နိုင်သူသည်အသုပ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအစာကျွေးပါ, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းမိသားစုချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ဆက်နွယ်ပုံပြင်များနှင့်အစဉ်အလာများကိုမျှဝေ. ဟင်းချက်တဲ့လူကို pampered ခံစားရကိုမြန်. ထိုသူသည်အသင့်အားအထူးင်လျှင်, သူ့ကိုခံစားရရန်အဘို့အသင်မည်သို့လိုချင်တယ်မဟုတ်ပါဘူး?
ဒီမှာကသတင်းကောင်းရှိပါတယ်: သင်သည်အချက်အပြုတ်ကျောင်းအတွက် sign up ကိုသို့မဟုတ်အဆုံးမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှားမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအုပ်စိုးရန်မလိုပါ; သင့်ချက်ပြုတ်အိုင်ကျူတိုးမြှင့်ဖို့ Step-by-step ကိုလဲ tutorial များကိုအများအပြားအွန်လိုင်းချက်ပြုတ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်!
နောက်ထပ်အသုံးဝင်သောမဟာဗျူဟာကိုသားသမီးတို့အဘို့ရေးသားထားသော cookbooks ယ်ယူရန်ဖြစ်သည်. သူတို့ကမီးဖိုချောင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူဘို့ကြီးစွာသောဖော်ဖို့ပေး, စံတိုင်းတာခြင်း, လွယ်ကူချက်ပြုတ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်.
သတိရ, ချက်ပြုတ် "ပူ" စဉ်းစားနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ယောက်ျား၏အစာစားချင်စိတ်မှအယူခံခံရဖို့နည်းလမ်းကောင်းတခုဖြစ်တယ်!